Zvishongedzo uye zvigadzirwa zveApple zvausingafanire kupotsa iyi Prime Day | IPhone nhau
Zvishongedzo uye zvigadzirwa zveApple zvausingafanire kupotsa iyi Prime Day
El Amazon Prime Day zvinoitika muna Chikumi 21 na22 Chikumi iri pano kutiunzira isu zvinonakidza zvinopihwa, pamwe inguva yakanakisa yegore yekutenga izvo zvishongedzo kana zvakajairika zvigadzirwa zveCupertino kambani. Usanonoka kutenga kwako zvakare, nguva yasvika yekutora izvo zvawanga wakamirira kwenguva yakareba.
Zvichida, Tinoda kukubatsira nesarudzo yezvinonyanya kufadza zvigadzirwa zveAmazon Prime Day zvine chekuita neApple uye zvishandiso zvacho zvakawandisa. Usarasikirwa nazvo, iwe uchave unokwanisa kunakidzwa kusvika pakakwirira neaya maAirPods, tambo dzeMagSafe uye zvimwe zvakawanda pamutengo wakanakisa wegore rese, urikupotsa here?
1 Zvishongedzo zve iPhone ne iPad
2 AirPods uye AirPods Pro pamutengo wakanakisa
3 HomeKit zvigadzirwa zveako smart imba
4 Apple zvigadzirwa pamutengo wakanakisa zvachose
Zvishongedzo zve iPhone ne iPad
Tinotanga nejaja isina waya MagSafe inoenderana neiyo iPhone yenguva iyoyo. Iyi charger Yasvika pamutengo wayo wepamusoro wemakumi matatu nemashanu euros. Unogona kuchaja yako iPhone zvachose zvisina waya uye zvakachengeteka. Tinokusiyira kuongorora kwedu kuti iwe ugone kuzvitarisa:
Zviripachena isu tinofanirwa kuenderera kune imwe yeaya makuru maApple zvigadzirwa izvo zvinogara zvichikwezva iwe asi kuti zvimwe hausati waedza kuedza, Apple Penzura. Kana iwe uine inoenderana iPad iwe haugone kupotsa uyu mukana, chizvarwa chechipiri Apple Penzura ingori 111 maeuro paAmazon, dhisikaundi ingangoita 20% yechinhu ichi inoenderana neiyo 12,9-inch iPad Pro (chizvarwa chechitatu nechina), 3-inch iPad Pro (chizvarwa chekutanga nerechipiri), iPad Air (chizvarwa chechina).
Kubhadharisa zvishandiso zvedu zvese panguva imwechete kunogona kunetsa kana isu tisingazive neichi chakanakisa chishandiso che Satechi. Iyo femu inonyanya kushandisa zvishandiso zveApple zvigadzirwa mune zvese zvinotipa izvi 3-in-1 isina waya yekuchaja doko izvo zvinotibvumidza isu kunakidzwa nekuchaja panguva imwe chete pa: Apple Watch, iPhone uye AirPods pasina dambudziko. Mutengo waro wenguva dzose uri € 99,99 asi isu tine 36% dhisikaundi iyo inotisiya isu hwaro pa € ​​63,99 chete
Isu tave kutaura nezvemabutiro, nekuti yedu iPhone inofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka kuti tirege kutya. Nekuti uyu ndiElago, senguva dzose, ichitipa inonakidza yemhando-mutengo imwe nzira. Ruzhinji rwemakesi avo e iPhone ari kutengeswa ino Amazon Prime Day, pamwe nezvidimbu zvinosvika makumi mashanu muzana, saka iri sarudzo inonakidza kutenga imwe.
AirPods uye AirPods Pro pamutengo wakanakisa
Iwo maAirPod akagamuchira yavo yatova yechinyakare yakakosha dhisikaundi yeAmazon Prime Day, isu tinotanga ne Yechipiri chizvarwa AirPods isina waya yekuchaja kesi, Vakagamuchira chakakosha kwazvo kuderedzwa paAmazon kuenda kunodhura chete 117 euros (179 mutengo wepakutanga). Isu tinorangarira kuti ndivo vhezheni neQi isina waya yekuchaja inosanganisirwa mune iyo kesi uye LED mamiriro chinongedzo mubhokisi. Kwandiri pachangu, zvinoita kunge ari mahedhifoni akanakisa mukukosha kwemari yakamboitwa naApple.
Kune chikamu chayo isu zvakare tine chipo chinonetsa kupotsa, icho che AirPods Pro. Iwo mahedhiyo "eprimiyamu" muTWS fomati iyo iwe yaunowana inogamuchira kudzikiswa kwe32% hapana chimwezve uye hapana chakaderera. Ivo vanogara kungori 188 euros (€ 279 mutengo wepakutanga) uye uchagamuchira kwavari mangwana kana waita kutenga kwako. Iwe unozogona kunakidzwa Spatial Audio, Dolby Atmos uye zvese zvechangoburwa maficha izvo Apple zvakarongedza mumusoro mavo nemutengo zvechokwadi, chitsotsi chaicho.
Dai iwe wanga wakamirira kuti ukwanise kuwana chero yedzimwe shanduro dzeAirPods, chokwadi, hauzowani mutengo uye vimbiso senge inoonekwa pane ino Prime Day.
HomeKit zvigadzirwa zveako smart imba
Apple uye yayo HomeKit vanofadza chero munhu anozvishandisa. Takatarisana neimwe yedzakanakisa dzimwe nzira dzekudzora imba yako pamwe ne Alexa, iyo vhezheni yeAmazon. Naizvozvo, isu tinodawo kukuunzira musanganiswa wakanaka wezvigadzirwa zvinonakidza. Isu tinotanga neiyo smart plug de Meross inoenderana neKeKKit uye nevamwe vese vabatsiri vema15 euros chete, kudzikiswa kwe31%.
Isu tinoenda izvozvi kuEufy, mucherechedzo unoitawo kuti zvigadzirwa zvienderane neKeKKit, mune ino neayo smart kamera inogamuchira 32% dhisikaundi uye inopihwa maeuro e33,99 chete. Iwe unogona kuongorora zvaunoda, ine inofamba inzwa, vanhu vanozivikanwa uye zvimwe zvakawanda pamutengo zvinoita kuti zvive zvakaoma kudzivisa muyedzo.
Isu tinotarisa kune mamwe marudzi ezvigadzirwa:
Meross 10m LED micheka inowirirana neKeKKit uye nevamwe vese vabatsiri, pamwe nemutengo unosvika makumi mashanu muzana, kwema 50 euros chete inova yakachipa pashoma LED inoenderana neKeKit.
Netatmo mamiriro emamiriro ekunze ane yekunze neyekunze base, ine yakakosha dhisikaundi iyo inoderedza mutengo wayo kubva ku149 euros kusvika ku109 euros.
Nuki Combo 2.0 kii ine sensor yemusuwo, smart electronic lock uye zvimwe zvinodiwa, mutengo wepadyo ne30%, uchibva ku269 euros kusvika ku199,99 euros.
Apple zvigadzirwa pamutengo wakanakisa zvachose
Isu tinotanga neiyo iPhone 12 mune yayo 128 GB vhezheni agamuchira. iyo 17% dhisikaundi, saka zvinongobhadhara chete 793 euros paAmazon. Iwe unotoziva kuti ine zvese zvinovimbisa uye mune ino kesi chishandiso chiri mune inokatyamadza bhuruu ruvara.
Protagonism ikozvino yeshanduro yapfuura asi zvine ruzivo rwakanyanya. Iyo iPhone 11 Pro Max mune yayo 512 GB vhezheni yesirivheri ine dhisikaundi inopfuura 30%, kugara pa € ​​1049 chete (€ 1548) nemakamera ayo matatu uye simba rese raunoda.
Tenga iPhone 11 Pro Max (512 GB) Sirivha nemutengo wakanakisa.
Iyo Apple Watch Series 3 mune yayo vhezheni ine 38mm GPS uye nzvimbo grey inogamuchira dhisikaundi ingangoita 30% inodhura chete 169 euros, Sarudzo inonakidza kwazvo kutanga neshanduro ine simba zvakakwana uye inoenderana ne wearOS 15.
Tenga Apple Watch Series 3 (GPS 38mm) nemutengo wakanakisa.
Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu, unogona kuenda zvakananga ku Apple Yekucherechedza Series 6 ine 44mm GPS zvakare nechidimbu chinonakidza, izvo zvino zvinodhura maeuro e389 chete, imwe yemitengo yakanakisa yakambopihwa.
Tenga Apple Watch Series 6 (GPS - 44mm) nemutengo wakanakisa.
Tinovhara naMambo weMadzimambo, iyo 13,3-inch Apple MacBook Pro ine Apple M1 processor uye 256 GB SSD Mune vhezheni yayo yesirivheri ine dhisikaundi iyo inoenda nayo kune chete 1104 euros nepo mutengo wayo wepakutanga uchidarika 1445 euros.
Tenga MacBook Pro M1 13,3 inches 256 GB SSD pamutengo wakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Zvishongedzo uye zvigadzirwa zveApple zvausingafanire kupotsa iyi Prime Day
iOS 15 uye iPadOS 15 zvave zvichishungurudza vashandisi
Takaburitsa tirera yemwaka wechipiri we "Ted Lasso" iyo inotanga muna Chikunguru 23